သက်ဝေ: February 2008
Posted by သက်ဝေ at 1:32 PM 10 comments: Links to this post
နေ့ သစ် တစ်ခုရဲ့ အစ…
အေးမြတဲ့ နှင်းစက်တွေနဲ့ 
အရောင်နက်နက် ကျောပိုးအိတ်ကလေး တစ်လုံး
နှင်းဆီပွင့် နီနီရဲရဲလေးတစ်ပွင့်ကို ကိုင်ထားတဲ့
ချစ်စရာ မီးခိုးရောင် အမွေးပွပွ ပွပွနဲ့ 
၀က်ဝံရုပ်လေး သေးသေးလေး တစ်ကောင်
ချောကလက်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ကိတ်မုန့် လေးတစ်လုံး
အနီရောင် ပို့ စ်ကဒ် လေးတစ်ခု…။
နေ့ သစ် တစ်ခုရဲ့ အလယ်…
နွေးထွေးတဲ့ နေခြည်တွေရယ်နဲ့ 
မရေတွက်နိုင်တဲ့ စကားလုံးပေါင်း များစွာ…။
တိုးတိတ် ညှင်သာ သီချင်းသံများ…
သိမ်မွေ စွာဖြင့် နက်နဲသော
နေ့ သစ် တစ်ခုရဲ့ အဆုံး…
မှောင်ရီရီ ညနေခင်း ဆည်းဆာ…
ကုန်လွယ်လွန်းတဲ့ နာရီ မိနစ် စက္ကန့် ပေါင်းများစွာ…။
တစ်နေ့ နေ့ ကိုရောက်ဖို့ …
တို့နောက်တစ်ခါတော့ ထပ်တွေ့ ဖြစ်ကြမှာပါနော်…။
Posted by သက်ဝေ at 5:15 PM4comments: Links to this post
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း မွေးနေ့ 
၁၉၁၅ ရှေ့နေ ဦးဖာသား
Posted by သက်ဝေ at 8:31 AM No comments: Links to this post
တောင်ပေါ်မြို့ ကလေး တစ်ခုရဲ့ 
အနွေးဓါတ်ပေး မီးလင်းဖိုကလေးရဲ့ အနား
ချစ်သူက အပြုံးတွေဝေလို့ …
ချစ်သူကို လွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ 
စိတ်ကူးအတွေးတွေ လူးလာခေါက်တုံ့ 
သူ့ နှလုံးသားတစ်စုံကို ဇွတ်အတင်း
အေးမြလန်းဆမ်း မြက်ရိုင်းပန်းတို့ ရဲ့ ကြား…
အရိုင်းလေပြည်တို့ခပ်ကြမ်းကြမ်းအဖြတ်မှာ…
သူ့ ဆံနွယ်တွေ ၀ဲလွင့်နေသလို…
သူ့ အပြုံးတွေ က သူ့မတူအောင် ရဲရင့်
ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ပန်းချီ တစ်ခြားစီဖြစ်အောင်ခွဲ…
မုန်တိုင်းတွေ အဆင့် မိုးစက်တွေ အလွင့်မှာ…
မရ အရ ခေါ်ထားခဲ့ရတဲ့ သူ့ အပြုံး နဲ့သူ့ နှလုံးသား…
ကြွေကျနေတဲ့ ပုလဲလုံးလေးတွေနဲ့ အတူ…
Posted by သက်ဝေ at 5:03 PM3comments: Links to this post
ဒီနေ့တကယ်ကို စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့ နေ့ ပါဘဲ။
မနက်က ဖုန်းနဲ့ ပေးထားတဲ့ Alarm ကအသံမမြည်တော့ အိပ်ရာထတာ နောက်ကျ ရုံးချိန် မမှီမှာစိုးလို့ကမန်းကတန်း အပြေး၊ လမ်းမှာ ခါတိုင်း တွေ့ နေကျ ဆက်ရက် အကောင်ကလေးတွေ အားလုံး တစ်ကောင်ချင်းစီ တစ်ကောင်ချင်းစီ ဟိုငေးဒီငေးနဲ့ တွေတွေ ဝေဝေ၊ အရင်နေ့ တွေကဆို အမြဲတမ်း နှစ်ကောင် သုံးကောင် တွဲလို့ တွေ့နေကျ...။ ဒီနေ့ တော့ ဘာကြောင့်များ အခုလို အဖေါ်ကွဲနေကြပါလိမ့် လို့ တွေးလို့မှ မဆုံးခင် စီးနေကျ ရထားတစ်စီး လွတ်သွားတော့တယ်။ ကဲ... စောင့်ပေအုံးတော့ နောက်ထပ် လေးမိနစ်...။
တော်သေးရဲ့ရုံးကားတော့ မှီသေးသား . . .
ဒီလိုနဲ့ရုံးကားပေါ်ရောက် မြင်နေကျ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်အချို့ ရဲ့ ပျင်းရိလေးကန်နေတဲ့ မျက်နှာတွေ... အော် သိပြီ သိပြီ... Holiday Mood က စနေပြီပေါ့။ မနက်ဖြန် ကစပြီး တရုတ်နှစ်သစ်ကူး အတွက် ရုံးပိတ်ရက် ငါးရက်ရမယ်လေ...။ ပျော်သည် ပျော်သည် ပေါ့။ ပြီးတော့ ရုံးကိုရောက်၊ ဆယ်မိနစ်လောက် ဟိုယောင်ဒီယောင်လုပ်၊ ကော်ဖီဖျော် E mail စစ် ပြီးတော့ ကိုယ့် Blog လေးကိုဖွင့်ကြည့်၊ အဲဒီမှာ ပြဿနာက စတော့တာပါဘဲ။ C Box မှာ ဘာမှ မမြင်ရတော့ဘူး။ ရလိုရငြားနဲ့ ဟိုလုပ် ဒီလုပ် လုပ်ကြည့်ပေမယ့် ဘယ်လိုမှ မရတော့။ သေပြီ ဆရာ...
မနက်တိုင်း Blog လေးဖွင့်ပြီး C Box လေးထဲက သူငယ်ချင်းလေးတွေ ရဲ့နှုတ်ဆက် စကားလေးတွေနဲ့ပျော်စရာ နေ့ သစ်တစ်နေ့ ကို အစပြုနေကျ၊ အခုတော့ ဘယ်နှယ့်လုပ်ရပါ့။ အင်း... ဆက်ရက်နှစ်ကောင်တွဲလေးတွေ မတွေ့ ခဲ့ရလို့ ဘဲဖြစ်ရမယ်။ One for Cry… Two for Joy… လေ။
ကိုယ့်ရဲ့C Box ကလေးပြန်ရဖို့အမျိုးမျိုး ကြိုးစားပေမယ့် မအောင်မြင်။ ရလိုရငြား C Box WebSite ထဲကိုဝင် Control Panel ကိုသွားပြီး HTML တွေကို Copy & Paste လုပ်တာလဲ မရ။ တစ်ခုခုတော့ အကြီးအကျယ် မှားယွင်းနေတာ သေချာနေပြီ။ ဘယ်လိုမှလုပ်လို့ မရတဲ့ အဆုံး E Mail Account တစ်ခု အသစ်ဖွင့်ပြီ့းC Box အသစ် ပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါ လဲမရ။ ဆိုးလိုက်တာ...
ဒါကြောင့် စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ဒီ Post လေးကိုထိုင်ရေးနေတာ...။ နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ သူငယ်ချင်းလေးတွေဆီက အကူအညီ အကြံပေးစကားလေးတွေ မျှော်နေပါတယ်နော်။ C Box မရှိပေမယ့် ဒီ Post လေးရဲ့Comment မှာ ရေးပေးခဲ့ကြပါနော်။ ကျေးဇူးတွေ အထပ်ထပ် ကြိုပြီး တင်ထားနှင့်ပါတယ်နော်။ ကူညီကြပါအုံး...
Posted by သက်ဝေ at 3:37 PM9comments: Links to this post
ဒီနေ့ စိတ်ထဲမှာ နင့်နင့်နဲနဲ ခံစား စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာလေးတစ်ခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ညက အိမ်ပြန်ရောက် . . . ရေမိုးချိုး တမင်းစားပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကွန်ပြူတာရှေ့ ထိုင် . . . Blog လည်ထွက် . . . Email တွေဖတ်ပေါ့။ အဲဒီလိုနဲ့ဟိုလုပ်ဒီလုပ် ဟိုတွေးဒီတွေး တွေးရင်း ဘာလိုလိုနဲ့အိမ်နဲ့ ဝေးနေရတာ ၅ - နှစ် တောင်ကျော် သွားပြီလို့ပြန်တွက်ကြည့်နေမိတယ်။
တစ်ပတ်မှာ ၅-ရက် နေ့ စဉ် အလုပ်သွားအလုပ်ပြန် အဲ . . . ပိတ်ရက်ကလေးနှစ်ရက် ကျပြန်တော့လည်း တစ်ပတ်လုံး ၀တ်ထားတာတွေကို လျှော်ရဖွတ်ရ မီးပူတိုက်ရ . . ။ နောက်ပြီး တော့ တစ်ပတ်စာ ဈေးဝယ် ကျော်လှော် ချက်ပြုတ် ရေခဲသေတ္တာ ထဲထည့်သိမ်းသင့်တာသိမ်း . . .။ ဒီလိုနဲ့တစ်ပါတ်ပြီး တစ်ပါတ် ကုန်ဆုံး . . . ။ အော် . . . ဘယ်လိုဘ၀မျိုးတွေပါလိမ့် လို့ တစ်ခါတစ်ခါ စိတ်နာနာတွေးမိတယ်။
ဒီလိုတွေးတော စဉ်းစားနေရင်း Singnet Mail Box ကို ဖွင့်လိုက်တော့ အိမ်က ဖေဖေ နဲ့မေမေ တို့ ဆီက Email ရောက်နေတာ တွေ့ တော့ တော်တော်ဝမ်းသာသွားတယ်။ လွမ်းနေတုံး ဆိုတော့လေ . . .။
Email က ဘာမှ အထွေအထူး အရေးတကြီး မပါပါဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း မာကြောင်း သာကြောင်း ပေါ့။ ဖေဖေ ရေးနေကြအတိုင်း ဖေဖေ နဲ့မေမေ တို့ အဆင်ပြေကြောင်း နေကောင်းကြောင်း သမီးကို သတိရကြောင်း သမီး ရော အဆင်ပြေရဲ့ လား အလုပ်တွေများနေလား နဲ့သမီးလဲ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက် နေကောင်းအောင်နေ ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေပါဘဲ။ ပြီးတော့ သမီးမေမေ က သမီးကြိုက်တတ်တဲ့ ဟင်းတွေချက်တိုင်း သမီးကို သိပ်သတိရနေတဲ့ အကြောင်း . . .။ အဲဒီကနေမှ ဖေဖေက ဘာရေးထားလဲဆိုတော့ အဝေးမှာရောက်နေကြတဲ့ သမီးတွေ သားတွေ မြေးတွေ ကို သတိရနေရင်းကနေ ဟိုးအရင်တုံးက အဆိုတော် တွံတေးသိန်းတန် ဆိုထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို သတိရပြီး အခုလဲ ဖေဖေ နဲ့ မေမေ တို့ ကအဲဒီ သီချင်းထဲကလို ဖြစ်နေပြီ လို့ ရေးလာတယ်။ (သီချင်းနာမည်တော့ထည့် မရေးထားလို့သက်ဝေ မသိပါ။)
သီချင်းရဲ့ ဆိုလိုရင်း ကတော့ . . .
ချစ်သူနှစ်ဦး အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လို့အိမ်ထောင်ပြု ကြပြီး အိမ်ထောင်ဦးအစမှာ အတူတူ ချက်ပြုတ် စားသောက်ကြတဲ့အခါ နှစ်ယောက်စာကလေးသာ ချက်ကြရတာမို့အိုးကလေး သေးသေးလေးနဲ့ချက်ကြရတဲ့ အကြောင်း . . .။ အဲဒီ့နောက် သားတွေ သမီးတွေ ရလာတဲ့ အခါကျတော့ မိသားစုဝင်တွေ များလာပြီး ထမင်းအိုး ဟင်းအိုးတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာရတဲ့ အကြောင်း . . .။ အခုကျတော့ သား သမီး တွေ အရွယ်ရောက် အိမ်ထောင်ရက်သားကျပြီး တစ်ယောက်တစ်နေရာစီ် အဝေးကိုရောက်နေတဲ့ အခါမှာ အဖိုးကြီး အဖွားကြီး နှစ်ယောက်သာ အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့ပြီး နှစ်ယောက်စာသာ အတွက်သာ ချက်ရတာကြောင့် ထမင်းအိုး ဟင်းအိုးတွေ ပြန်သေးသွားရတဲ့ အကြောင်းတွေ နဲ့ ဖွဲ့ ဆိုထားတာပါ။
ဒီသီချင်းလေးဟာ အပေါ်ယံ အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ခပ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးလို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ့်တကယ် ခံစားကြည့်လိုက်ရင် ဘယ်လိုမှ မပေါ့ပါးနိုင်တာ အသေအချာပါ။ ဒါကြောင့် ဖေဖေ့ ဆီက E Mail ဖတ်ပြီး တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကလဲ အဝေးမှာဆိုတော့ ဘာမှလဲ လုပ်ပေးလို့ မရတာမို့ ပိုပြီး စိတ်တွေထိခိုက် ရပါတယ်။
မိဘတွေတိုင်းဟာ သားသမီး ဘယ်နှစ်ယောက်ကိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ပညာတွေသင်ပေးပြီး လူတစ်လုံး သူတစ်လုံး ဖြစ်လာအောင် ပြုစုပျိုးထောင် ပေးခဲ့နိုင်ကြပေမယ့် သား သမီး တွေတိုင်းကတော့ဖြင့် နှစ်ဦးတည်းသာရှိတဲ့ မိဘတွေကို အချိန်ပြည့် အနီးကပ် အလုပ်အကျွေး မပြုနိုင်ကြတာ များလှပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တော့ ဒီဖက် ခေတ်ကြီးထဲမှာ ပိုပြီးများမယ် ထင်ပါတယ်။ စဉ်းစားမယ်ဆို စဉ်းစားချင်စရာတွေပါနော် . . .။
ဒါကြောင့် ဒီ Post လေးကိုဖတ်ပြီး သက်ဝေတို့ လို ဘ၀အခြေအနေတွေ အရ မိဘနှစ်ပါးနဲ့ ဝေးရာ ရောက်နေကြရသူတွေ . . . အထူးသဖြင့်တော့ ညီအစ်ကို မောင်နှမ နည်းပါးတဲ့ အတွက် အဖေ နဲ့အမေကို နှစ်ယောက်ထဲ အဝေးမှာ ခွဲထားခဲ့ရသူတွေ . . . ကိုယ့် မိဘနှစ်ပါး ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြသလဲ . . . ရှေ့ ဆက်ပြီး ဘာတွေ ဘယ်လို လုပ်ပေးကြမလဲ . . . ဆိုတဲ့ အတွေးလေး တစ်စွန်းတစ်စလောက် ခေါင်းထဲကို ဝင်လာရင် သက်ဝေ ဒီ Post လေး ရေးရကြိုးနပ်ပြီ လို့ ထင်ပါတယ်။
Posted by သက်ဝေ at 4:50 PM5comments: Links to this post